प्रधानमन्त्री ओलीले सोधेः के मैले राजीनामा दिन मिल्छ ?
काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अहिले आफूले राजीनामा नदिने बताएका छन्। बुधबार मनमोहन सेन्टर एनेक्स भवनको उद्घाटन कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो राजीनामा मागेको सुन्नमा आएको तर आफूले राजीनामा नदिने प्रस्ट्याएका हुन्।
‘सञ्चार माध्यममा हल्ला आउँछ राजीनामा दिन पस्यो। तर, तपाईँहरु बिचार गर्नुस् के अहिले मैले राजीनामा दिन हुन्छ ? राजीनामा दिन मिल्छ ?,’ उनले भने, ‘मेरो लागि होइन, देशको लागि हो। मैले राजीनामा दिनु भनेको देशलाई बर्बादीतिर जान दिनु हो। त्यसकारण म राजीनामा दिनेवाला छैन।’ प्रधानमन्त्री ओलीले बाहिर के तयारी भइरहेको छ भन्ने बारेमा आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बताए।
आफ्नो रहरले प्रधानमन्त्री नभएको उल्लेख गर्दै उनले जनताको आवश्यकता र समर्थनले भएको दाबी गरे। ‘बाहिर तयारी गर्दैछन् भन्ने सुनिन्छ। केही पनि हुने वाला छैन। म यस ठाउँमा आएको मेरो रहरले होइन, जनताको आवश्यकता र समर्थनले आएको हो। यहाँ पुगेको व्यापक जनसमर्थनबाट हो,’ उनले भनेका छन्, ‘तपाइँहरु ढुक्क भएर काममा लाग्नुस्।’ प्रधानमन्त्री ओलीले देशमा अस्थिरता तर्फ धकेल्न खोज्ने प्रयास भइरहेको समेत दाबी गरे।
उनले भनेका छन्, ‘एक थरीको अस्थिरताको खेती गरिरहने, देशलाई अस्थिरता तर्फ धकेल्न खोज्ने प्रयासहरू गर्ने आदत छ। त्यस्तालाई म के गर्छु र। देशमा स्थिरताका लागि काम गर्छौँ। विकासका र स्थिरताको निरन्तरताका लागि हामी काम गर्छौँ।’